တိရိစ္ဆာန်များသည်ပင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ၁၀၂၇၆ Colosseum အတွက်ဧရာမ LEGO ကိုနှစ်သက်သည်
05 / 09 / 2021 05 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 238 Views စာ0မှတ်ချက် ၁၀၂၇၆ Colosseum, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, ဖန်ရေကန်, ကြောင်, Colosseum, အသေသတ်ခြင်းကိုစတား, Lego, လူကြီးများအတွက် Lego, ပေ, အိမ်မွေးတိရိစ္ဆန်, Reddit
အဆိုပါ လူကြီးများအတွက် Lego ၁၀၂၇၆ Colosseum အကြီးဆုံးအဖြစ်ဖြုတ်ချခံရပေမည် Lego သတ်မှတ်ထားပေမယ့် furry fan တစ်ယောက်ကစိတ်မပါပုံရတယ်။
၁၀၂၇၆ Colosseum အကြီးဆုံးမဟုတ်တော့ပါ Lego ထုတ်ဝေမှုအဖြစ်သတ်မှတ်သည် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ ယခင် ၉.၀၃၆ အစိတ်အပိုင်းများတွင်နောက်ဆုံးဖယောင်းတိုင် ၁၁.၆၉၅ ခုသို့ဆီမီးမကိုင်ပါနှင့်။ သို့သော်လည်းမော်ဒယ်ကို ၀ ယ်ယူနိုင်သေးသည်။ တည်ဆောက်မှုတွင်အနည်းဆုံးပန်ကာတစ်ခုရှိနေသေးပုံပေါ်သည်။
Reddit အသုံးပြုသူ အံ့သြစရာကောင်းတယ် ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည် ၁၀၂၇၆ Colosseum၎င်းကို၎င်းတို့၏အိမ်တွင်ခင်းကျင်းပြသခြင်းဖြင့်ဂုဏ်ယူစွာတင်ပါ။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကမကြည့်တဲ့အခါသူတို့ရဲ့ feline အဖော်ကသူတို့ကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
မည်မျှပင်အဆင်မပြေပါစေကုတင်ပေါ်တွင်ထိုင်နေပုံရသည် Lego အုတ်တွေ၊ ဒီကြောင်ကစိတ်မ ၀ င်စားဘဲအိမ်မှာအပန်းဖြေဖို့နေရာအသစ်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ကုသပေးနေသည် လူကြီးများအတွက် Lego ကုတင်ကဲ့သို့တည်ဆောက်ထားသောကြောင်သည်ကစားကွင်း၌ခြင်္သေ့များနှင့်အခြားသားရဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသောတိုက်ပွဲများစွာကိုမရည်ရွယ်ဘဲရည်ညွှန်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဒီစိန်ခေါ်မှုကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်သူရဲကောင်းရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုငါတို့မဆန်းဘူး။
ဒါကပထမဥပမာနဲ့ဝေးတယ် ၁၀၂၇၆ Colosseumအခြားပိုင်ရှင်များ၏အရွယ်အစားကဲ့သို့မော်ဒယ်၏ဘက်စုံသုံးနိုင်စွမ်းကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်လျင်မြန်စွာပြသခဲ့သည် အခြားကြီးမားသော Star Wars ဖန်တီးခြင်း ၎င်းနှင့်ပင် ၎င်းကိုငါးပြတိုက်တစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းသည်.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့မိတ္တူဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ၁၀၂၇၆ Colosseum ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစုံတယောက်သောသူသည်မှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ.
← LEGO World Builder သည်သင်၏သိပ္ပံဝတ္ထုဒီဇိုင်းများကိုလိုချင်သည်
Playtesting သည် LEGO Builder ၏ခရီးကိုပိုမိုစိတ်ခံစားမှုဖြစ်စေခဲ့သည် →